UN-HABITAT | Providing safe drinking water to those in need during the hot summer months
UN-HABITAT > News > Providing safe drinking water to those in need during the hot summer months
Providing safe drinking water to those in need during the hot summer months
As the summer heats up, communities in the informal settlements is having trouble getting enough drinking water. On average, the daytime temperatures reach more than 37 degrees Celsius on most days.
Over 24,060 ten-liter water bottles have been distributed to 12,030 households in Yangon’s informal settlements with the help of volunteers from the community.
Daw Moe Moe,amother of five children, recently lost her husband due toaCOVID infection. “I earn about 7,000 kyat per day working atalocal betel nut cutting work. So, despite knowing that safe drinking water is important forahealthy life, I couldn’t afford to buy purified drinking water bottles because they cost 700 to 1000 kyats.” she said.
She continued, “We quickly become thirsty as the weather warms up in the summer. My family needs an adequate supply of drinking water. I’m glad we got what we needed at the right moment. I believe that donating water isagood deed, and I am grateful to UN-Habitat and the Japanese people for their assistance.”
UN-Habitat continues to support the communities in informal settlements by providing updated information about COVID-19 and preventive measures with the support of the Government of Japan.
ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီမှာ လိုအပ်နေသူများထံ ဘေးကင်းလုံခြုံသော သောက်သုံးရေ ပို့ဆောင်ခြင်း။
နွေရာသီ ပူပြင်းလာသည်နှင့်အမျှ တရားမဝင် အခြေချနေထိုင်ရာ နေရာများမှ ရပ်ရွာလူထု သည် သောက်သုံးရေ အလုံအလောက်ရရှိရန် အခက်ကြုံနေကြရသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် နေ့ဘက်အပူချိန်သည် အများအားဖြင့် ၃၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက် ပိုများသည်။
ရပ်ရွာမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏အကူအညီဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ တရားမဝင် အခြေချနေထိုင်ရာ နေရာများတွင် နေထိုင်သည့် အိမ်ထောင်စု ၁၂,၀၃၀ အတွက် တစ်ဆယ်လီတာ ရေသန့်ဗူး ၂၄,၀၆၀ ကျော်ကို ဖြန့်ဝေခဲ့ပါသည်။
ကလေးငါးယောက်မိခင် ဒေါ်မိုးမိုးသည် ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို မကြာသေးမီက ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ “ကွမ်းသီးညှပ် တဲ့ အလုပ်ရုံမှာ နေစားခ တစ်ရက်ကို ကျပ် ၇,၀၀၀ လောက် ရပါတယ်။ သန့်ရှင်းတဲ့ သောက်သုံးရေက ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးမှန်း သိပေမယ့် သောက်ရေသန့် တစ်ဗူး oယ်ဖို့ဆိုရင် ၇၀၀ ကနေ ၁၀၀၀ ကျပ်လောက်အထိ ကုန်ကျတဲ့အတွက် မဝယ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ” လို့ သူမကပြောပါတယ်။
“နွေရာသီမှာ ရာသီဥတု ပူလာတာကြောင့် မကြာခဏ ရေဆာပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ မိသားစုအတွက် လုံလောက်တဲ့ သောက်ရေ လိုအပ်ပါတယ်။ အခု လိုအပ်တာတွေကို လိုအပ်နေတဲ့ အချိန်အခိုက်အတန့်မှာ ရလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။ ရေလှူတာက ကုသိုလ်ကောင်းမှု လုပ်တာလို့ ကျွန်မယုံကြည်တယ်။ ပြီးတော့ UN-Habitat နဲ့ ဂျပန်ပြည်သူတွေကို သူတို့ရဲ့အကူအညီအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။” လို့ သူမက ပြောပါတယ်။
UN-Habitat သည် ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် COVID-19 အသိပညာပေး အချက်အလက်များ နှင့် COVID-19 ကာကွယ်ရေး ဆောင်ရွက်မှုများကို တရားမဝင် အခြေချနေထိုင်ရာ နေရာများမှ ရပ်ရွာလူထု ကို ဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီလျက်ရှိပါသည်။